Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo la sii dardaarmay raysal wasaaraha uu Farmaajo magcaabay. - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo la sii dardaarmay raysal wasaaraha uu Farmaajo magcaabay.
Siyaasaga mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan CabdiShakuur Warsame, ayaa qoraal uu kula dardaar mayo raysal wasaaraha cusub ee uu magcaabay madaxweyne Farmaajo ku baahiyay bartiisa Facebook.
“Waxaan soo dhoweynayaa Raysalwasaaraha cusub Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ah nin aan muddo aqaannay, kuna bartay dadnimo iyo wanaag, waxaan Ilaaheey uga baryeynaa in uu la garab galo xilka iyo masuuliyadda uu Soomaali u qaaday.” Ayuu Cabdiraxman Cabdishakuur ku bilaabay qoraalkiisa.
“Mudane RW waxaad ku soo aadday xilli adag, xasaasina ah oo ay maalmo kooban ka harsantahay muddo xileedkii dowladda, laguna heshiiyey hannaankii doorashada oo heer Federaal ah”
“Mudane, waqti badan ma haysatid, waxaadse heli kartaa fursad aad ku reebto raad togan iyo taariikh toolmoon, halbeegga hawshaaduna waa in aad dalka si nabad ah uga talaabisid xilliga kala-guurka ah ee shiidaadiisu badantahay . Waxaad ku soo beegantay xilli dadkii la kala irdheeyey, saamilaydii siyaasadeedna kala aamin baxeen, culayska ugu wayn ee aad wajahayso waa in aad ur u bixiso siyaasadda cakiran, is fahamna ka dhex abuurto siyaasiyiinta kala dhintay”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa raysal wasaaraha cusub uga digay in uu horboodo ololaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo, waxaana uu taabeddelkeeda usoo jeediyay in uu dhex u noqdo ragga uu tartanku ka dhexeeyo.
“Madaxweynuhu wuxuu kaa rabaa in aad hormuud u noqoto ololahiisa doorashada, inta kalana waxey kaa rabtaa in aad u dhaxeyso oo aadan dhinacna u dheelliyin, meelmariso fulinta heshiiska doorashada kana fogaato wax kasta oo shaki abuuri kara ama dib u dhac keeni kara, kalana tashato saamilayda siyaasadeed dejinta jadwalka doorashada iyo dhismaha guddiyada’’
Cabdishakuur, ayaa qoraalkiisa kusoo gabagabeeyay .
“Inkastoo xil qaran lagu magacaabay, haddana waxaad meteshaa dad miisaankoodii siyaasadeed maqanyahay iyo deegaan dhibteysan, taasina waxay kaaga baahantahay in aad muuqaal Raysalwasaare iyo mataalad siyaasadeed yeelato, kana feejignaato in aad asxaabtaada iyo dadkaada ka cararto, si aadan beri cidla u soo dhicin”.
Cali Khaliif Galleyr oo maanta la aasayo